Cool alaab waa ciyaar booska online ka WMS oo waa ciyaarta ugu horeysay ka doona liis si ay u isticmaalaan qarxeen bixiyo engine. Afyare ayaa asal ahaan uu leeyahay 6 duntu oo bixiya dhammaan siyaabaha. kulankaan Waxaad ciyaari karo ka yar intii 50p per wareejin in ay sida ugu badan £ 200 wareejin ah. Ciyaarta ayaa sidoo kale kasoo muuqday wareeg bonus sida dhigeeysa free, fatahmaan duntu iyo wilds.
Graphics oo Music
Alaab Cool ayaa baraf ah kinda theme la alaab midabo kala duwan xardhey duntu ku. muuqaallo kale ma run ahaantii in wanaag loo qoro heshiis weyn oo ku saabsan laakiin waxay kaliya oo ku saabsan shaqo ku filan si aad waayo-aragnimo play ciyaarta aan caajiso. music The sidoo kale waa on the lines isku mid ah iyo kaliya ma ku filan. In kastoo aan si dhab ah niyad jab aad kinda tagay oo raba more.
Waayo, ciyaar in waxa laga heli karaa dhammaan dhufto ee Qabooji alaab waxaa fiican filaayo in kasta oo dhufto ee ka. Jawaabta screen taabashada on telefoonada mobile waa weyn iyo sidoo kale ciyaarta ka ciyaara aan Marlon badan ama dib u dhac. shaqo fiican ka WMS on wajigan.
Qarxeen The bixiyaa engine asal ahaan aad siinaysaa siyaabo kala duwan inay ku guuleystaan ​​sida calaamadaha duurjoogta nacayso jahawareer on duntu by-engeeg iyo meel kasta qarxeen. play ciyaarta ayaa sinaba u eg yahay in oo ka mid ah kulan booska classic inuu ku guuleysto aad leedahay si aad u hesho 4 ama in ka badan calaamadaha tallaabadaas vertical ama horizontal waafaqsan. Markaasaa calaamadaha sixir waa la wada baabbi'iyey si ay kuu siiyaan calaamado cusub oo fursad ay mar kale ku guuleysan.
Alaab Cool asal ah waa 5 ciyaarta booska Reel la siyaabo kala duwan in ay ku guuleysato. kulankaan Waxaad ciyaari karo ka 50p per wareejin in ay sida ugu badan ee 200 £ wareejin ah. Afyare wuxuu leeyahay hoos u ah in ay cadow dhexdhexaad ah leh wax badan oo si joogta ah u dhaca guul yar. Waxa kale oo aad samayn hesho guul weyn laakiin waxaad TGS waxay leeyihiin wax yar samir ah in.
Dabeecadda xiiso leh iyo soomi Diinna ee ciyaarta this idin xusuusiyo laga yaabaa of NetEnt ee Starburst. Dhab ahaantii labadaas kulan, kuwaas oo ku siin nooca la mid ah ee ciyaarta ciyaaro waayo aragnimo gaar ahaan tan iyo markii labada nooc la mid ah matoorada ciyaarta.
Also this game has a free spins bonus which when triggered will you give you up to 8 dhigeeysa free. This is actually triggered when 4 or more of the bonus symbols are destroyed.